के किम जङ-अन विदेश भ्रमणमा जान डराउँछन्? – Medianp
आफ्ना क्षेप्यास्त्र परीक्षण र पारमाणविक कार्यक्रमलाई लिएर उत्तर कोरिया अचेल विश्व कूटनीतिको केन्द्रमा छ। न्यूयोर्कमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पनि उत्तर कोरिया एउटा मुद्दा बनेको छ।
उत्तर कोरियाभन्दा त्यहाँका नेता किम जङ-अन अझ बढी चर्चामा छन्। उनी आफ्ना दिवंगत बुवा तथा पूर्व नेता किम जङ-इल र हजुरबुवा किम इल-सुङभन्दा पनि बढी ‘रहस्यमयी’ भएको बताइन्छ।
सन् २०११ मा बुवा किम जङ-इलको निधन भएपछि किम जङ-अनले उत्तर कोरियाको शासन सम्हालिरहेका छन्। सत्ताको बागडोर सम्हालेयता किम जङ-अनले अहिलेसम्म विदेश भ्रमण गरेका छैनन्।
हुन त उनी विदेश भ्रमणमा नजानु धेरै आश्चर्यको विषय होइन किनकि उनका बुवा र हजुरबुवाले पनि खासै विदेश भ्रमणमा जाने गरेका थिएनन्। तर आश्चर्यको कुरा के छ भने उत्तर कोरियाको नजिकका मित्र मानिने चीन र रुसको पनि किम जङ-अनले भ्रमण गरेका छैनन्।
उनका बुवाले कम्तीमा चीनको भ्रमण गर्दथे। किम जङ-इलले सन् २०१० र २०११ मा चीनको भ्रमण गरेका खबरहरु अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आएका थिए।
त्यतिबेला उनको भ्रमणलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने किम जङ-इलको रणनीतिसँग जोडेर हेरिएको थियो। चीनसँग नजिकको सम्बन्ध भएपनि किम जङ-अनले हालसम्म त्यहाँको भ्रमण किन गरेका छैनन्?
सिंहले भने, “किम जङ-अनले उत्तर कोरियालाई विश्वदेखि अलग राखेका छन्। विदेश भ्रमणमा उनी नजानुका कैयौँ कारण हुनसक्छन्। आफ्नो सुरक्षालाई लिएर उनमा डर हुनसक्छ। उनलाई कुनै पनि देशमाथि विश्वास छैन।” २६ वटा मुलुकसँग उत्तर कोरियाको कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको बताइन्छ।
दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको ७० वर्ष पुगेको अवसर पारेर सन् २०१५ को मेमा किम जङ-अनले रुसको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम थियो। रुसले पनि उनको भ्रमणबारे जानकारी गराएको थियो तर त्यसको केही दिनपछि किम जङ-अनले यात्रा रद्ध गरेको खबर प्रकाशमा आयो। सन् २०१५ को मे ९ तारिखमा किम जङ-अन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच भेटवार्ता हुने कार्यक्रम थियो।
उनी रुस गएको भए त्यो उनको पहिलो विदेश भ्रमण हुने थियो। त्यतिबेला रुसी राष्ट्रपति पुटिनका प्रवक्ताले किम जङ-अन प्योङयाङभन्दा बाहिर जान नचाहेको र त्यो उनको आन्तरिक मामिला भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। उत्तर कोरियाली नेता न विदेश भ्रमण गर्न चाहन्छन् न त विदेशी नेतासँग सम्पर्कमा आउन चाहन्छन्।
अमेरिकाले उत्तर कोरियासँग सम्पर्क स्थापित गर्न कैयौँ पटक प्रयत्न गरे पनि त्यो सफल हुन नसकेको बताइन्छ। सन् २०१५ को नोभेम्बर १३ तारिखमा ब्रिटेनको द गार्डियन पत्रिकाले उल्लेख गरे अनुसार देशभित्र पनि किम जङ-अनले भ्रमण गर्दा उनको लागि घुम्ती शौचालयको व्यवस्था गरिन्छ। के किम जङ-अनले आफ्नो ज्यान खतरामा रहेको महसुस गर्छन्?
‘दबंग’ खानसँग ६ पटक काम गर्न कसले गर्‍यो रिजेक्ट ?
चीनका पूर्वप्रधानसेनापतिलाई आजीवन काराबासको सजाय
भारतको ‘द्रूतरेल’ जो प्रतिघन्टा १८० किमि कुद्थ्यो, पहिलो यात्रामै लाग्यो ठेस